DISO LALANA (fizarana fahadimy)
Nanomboka teo dia nihaona isan’andro izaho sy i Manambina. Efa samy mahafantatra ny ray aman-dreny roa tonta fa miaraka izahay,ry zareo koa moa mifankalala rahateo dia tsy nisy olana. Samy nanatra ny amin’ny fitondran-tena , sy ny momba ny fiainan’olon-droa amin’ny ankapobeny ireo ray aman-dreny.
Iray volana taty aorian’ny niarahanay dia niroso tamin’ny fanaovana firaisana ara-nofo izahay. Vetivety loatra hoy ireo namako,nefa efa samy tsy naharitra izahay, asa na nohon’ny fihaonanay matetika loatra na tena ny fitiavana betsaka tao aminay no nahatonga an’izany, fa samy tsy nanenina aloha dia izay no zava-dehibe taminay.
Tonga ity ny fotoana handehanana hakarivotra kely.Izaho ho any Tuléar ary i Manambina hamonjy famadihana any Antsirabe. Nalaina ery izahay ny hisaraka, satria iray volana be izao no tsy hihaona.
Izaho sy izy dahy zandriko no nandeha aty Tuléar, i Vahatra tsy nety fa misy tsy misy hatao hono aty amin-dry nenitoa satria tsy misy ankizy. Efa lehibe sy lasa nanambady daholo moa ny zanaky ry zareo, fa na izany ary tianay telo mianadahy ny mankaty satria ampihantainy be izahay. Izy mivady ireo koa no ray aman-dreniko amin’ny batsisa hany ka toy ny zanany mihitsy no andraisany ahy.
Vao tonga teny amin’ny stationnement izahy dia io enyi dadatoa sy i nenitoa manofahofa tanana.
- Tongasoa ianareo rankizy! Nanao ahoana ny dia? Hoy i dadatoa
- Manao ahoana i dadatoa sy i nenitoa! Hoy izahay telo niaraka namaly
- Vizambizana ihany dadatoa a! hoy aho, lava ihany iny lalana iny na dia efa faleha matetika ary. I Anjara izany moa dia nimenomenona mihitsy fa sambany moa izy izao no mandeha taxi-brousse mankaty.
- Ianareo kosa mampijaly zaza! Fa maninona anefa i dada no tsy nandeha e? hoy i nenitoa
- Afaka tapa-bolana hono izy vao congé, sady fohikely ny congé-ny amin’ity fa aleo hono amin’ny décembre no maka maromaro.
- Ary ialahy ve ry Sedra tsy vizaka? Hoy i dadatoa nanontany ilay zandriko lahy.
- Vizaka ihany ka, fa tsy tena vizaka be akory.
- Io fa efa mampidina entana ny aide-chauffeur fa atoroy an’i Joany (chauffeur-ndry dadatoa) ny anareo ho raisiny ry Rohy a! hoy i nenitoa.
Niala teo izahay dia nody tany an-trano, niala sasatra fa lava iny lalana iny. Nalahelo an’i Manambina sahady aho nefa asa izy izay raha mba mahatsiaro ahy any Antsirabe any.
Nandeha ny andro, tapa-bolana sisa dia hody izahay.Somary tsy salama i Anjara dia izao izahay vao ho any Ifaty toy ny mahazatra rehefa mankaty.
Mahafinaritra ny aty amoron-dranomasina, tsara ny rivotra, mampahazo aimbaovao, mahavelombelom-bolo. Isan’andro dia milomano foana no ataonay dimy mianaka, makeny amin’ny ranomasina na ao amin’ny piscine,misy fanatan-jahantena maro afaka atao koa ato amin’ny hotely ipetrahanay. Idadatoa manao echec, poker, billard, sy ny maro hafa, izy dahy moa dia variana ao amin’ny parc natao hilalaovan’ny ankizy, izaho sy i nenitoa kosa dia ny milomano sy manao jogging no tena angadinay.
Fa ankoatra ireo zavatra izay manodidina anay ireo dia misy tovolahy sady bikana no ranjanana nifanolo-bodirindrina tamin’ny bungalow-nay. Isaky ny mandeha milomano izahay dia mifanena aminy foana, izy efa nahavita amin’io, mitsikitsiky be foana izy rehefa miarahaba anay. Indray maraina,tafaraka tao anaty piscine izahay.
- Manao ahoana ianao! Rudy no anarako
- Manao ahoana i Rudy, faly mahafantatra, izaho Rohy
- Faly mahafantatra an’i Rohy! Tsara anarana be ianao izany.
- Misaotra, hoy aho sady menatra
- Ary aiza i dada sy mamanareo ary ny zandrinareo androany toa tsy niaraka aminao?
- Tsy ray aman-dreniko ireny, hoy aho, fa dadatoa sy nenitoako, lasa nandeha nitsangatsangana nijery ilay embouchure ry zareo fa izaho tsy dia nazoto androany fa somary mararirary ny lohako, sady vao tany koa aho tamin’ny taona lasa.
- Angaha ianareo manao vacances aty foana isan-taona?
- Tsy tena isan-taona fa matetika makaty.
- Fa avy aty angaha ianareo sa?
- Ieny, ny dadako valovotaka any Ankazoabo, dia anabaviny iny nenitoako iny, mipetraka eto ry zareo.
- hay! Ary hono hoy aho raha tsy mahadiso, aiza ianao izany no misakafo izao atoandro izao?
- Manamboatra sandwich aho dia mividy jus, tsy te hihinana zavatra betsaka aho.
- Saika hanasa anao hiara-hisakafo amiko mantsy aho raha toa ka tsy mampaninona anao.
- Tsy maninona ka, fa aiza isika no hisakafo, sao handeha lavitra?
- an an an, tsy lavitra ka, izaho mahandro ao amin’ny bungalow-ko ao ihany dia ao isika no hihinana raha mety aminao.
Somary sadaikatra ihany aho satria olona mbola tsy niresaka tamiko akory ity izy nefa tonga dia hitondra ahy any amin’ny bungalow-ny any, eny fa na dia hisakafo ary. Hitako ohatrany hafahafa izany ny tian’ny Rudy ahatongavana nefa tsy sahy nandà aho sao dia izaho no ratsy eritreritra.
- Ieny ary e! tsy maninona ka. Fa ianao irery angaha no aty?
- Ieny ry Rohy, izaho irery, ny fofombadiko no tokony hiaraka amiko fa tsy afaka tampoka indray izy fa misy asa tsy maintsy ataony maika dia nijanona any Tanà izy.
- Koa maninona raha nahemotra dia miaraka ianareo?
- Tena tsy mety ry Rohy satria loka azonay tamin’ny tombola izay ito dia tapa-bolana ihany ny fotoana nomeny handehanana raha tsy izay dia maty ho azy ilay izy dia nandeha aho.
- Koa naninona tsy mba nitondra namana na izany ary fa dia ianao irery ve?
- Tsy misy afaka sy efa manana programa daholo ny olona ry Rohy a! dia izao mandeha irery izao. Soa ihany fa mba ireo zavatra maro azo atao raha tsy izany dia lava dia lava ny herinandro hijanonako aty.
- Hay herinandro ihany ianao ho aty! Dia rahoviana izany no miverina miakatra?
- Izahay koa rafak’ampitso no miala aty fa mbola misy herinandro vao miverina any Tanà.
- Efa amin’ny iraikambinifolo izao ry Rohy, mandeha be izany lera izany, tonga dia hiaraka amiko izany ndry izao sa rehefa amin’ny 12h30 no mandalo? Mbola hikaraka kely aho mantsy
- Ao fa arahiko avy ato aoriana ianao e, mbola te hilalao rano kely aho mantsy.
- Ieny ary e! rehefa avy eo izany Rohy an! Tandremo sao tsy tonga akory ndry!
Dia lasa izy sady nitsikitsiky be ery! Tovolahy izany marina, tena sady bikàna no misy endrika. Nandalo tampoka tao an-tsaiko i Manambina, inona ary izay no ataony? Moa ve mampiresaka vehivavy hafa toy ny nataon’i Rudy ahy koa izy any Antsirabe any? Aleo angamba tsy halefa lavitra ny eritreritra ka!
Nanao longueur maromaro aho dia niakatra handro sy hisolo akanjo alohan’ny hisakafo hisaraka amin’ny Rudy. Eo am-pandroana aho no injay anefa nisy nandona tao ambaravarana, iza ary izany?
- Iza izao ô? Hoy aho
- Izaho ihany Rohy a! hoy ilay feo
- an! Loza marina, izaho ity mbola tsy vita omana akory, hoy aho an'ereritreritra, dia namaly aho, ahoana ry Rudy?
-Hividy zava-pisotro kely etsy amin’ny bar aho sao mandona ao ianao ka tsy misy mamaly, izay ihany no nandalovako, sa lalovako eto ianao rehefa miverina aho?
- Andalovy ato ary aho e!
Tapitra ny fiomanako, robe bretelle fotsy misy sarisary vonikazo no nanaovako dia kapa fotsy, sasatra aho ny nijery fitaratra,toy ireny hamonjy rendez-vous ireny. Mandrapahatongan'i Rudy dia nanontany tena aho ny amin'ny antony anasany ahy hisakafo hiaraka aminy? maninona izy no miandry hoe tsy eo ry dadatoa vao miresaka sy miantso ahy raha madio ny sainy? Izy amin'io hoy izy manana fofombady, izaho koa manana an’i Manambina nefatsy fantany aloha izany, inona ary no mety hitranga eto anio? inona no hataoko rahaizao izy no manao fihetsika hafahafa amiko?
Nandalo I Rudy naka ahy, nandefa mozika milantolanto sady malefaka izy nandritra ny fotoana nisakafoananay. Tsy dia nisy niteny firy izahay fa samy nankafy ny brochette de crevette nataony miaraka amin’ny mayonnaise sy ny saosy hafa ary ny lasary, tsy misy vary fa dia izay fotsiny.Hay hono izy cuisinier amin’ny restaurant lehibe ao Antananarivo, hitako tena matsiro ery ny sakafo nataony.
- Dia ahoana ry Rohy, tsara ihany ve? Hoy izy nanontany, efa nataoko ohatra ny hoe any amin’ny restaurant mihitsy isika izaona dia tsy ampy fitaovana ary aho aty.
- Tena tsara ka! Mbola tsy nihinana zavatra tsara ohatran’izao aho, tena marina e!
- Aiza indray, misaotra an-dry makafy ny nahandroko ary e! ny mahandro dia ny mahita nyolona afa-po rehefa avy mihinana ny nahadroko aky no mba tena tiako a! Sao dia tsy ampy an-dry aloha e?
- Ampy tsara ka, misaotra fa voky.
- Tsy misy isaorana akia a! hitondra fahasalamana, ho sandry ho nofo hoy ny fiteny, sa tsy izany moa? inona no ataon-dry zao?
- Euh… tsy misy, hanao sieste angamba
- Izaho koa akia izany te hanao sieste nefa mahafinaritra ahy ny miresaka amin-dry, tovovavy tsotra, sariaka, sady tsaratarehy kely.
Menatra be aho, henoko mena be indray ny tarehiko, tsy hitako izay havaly dia nitsiky fotsiny aho. Injay ary ilay resaka hoy aho tan'eritreritra, inona no hataoko, inona no havaliko? Tena mbola tsy sendra toe-javatra ohatran’izao aho mantsy. Raha mbola eo ampieritreretana izany aho dia hoy izy nanohy:
- Ary toa tsy miteny ndry sady menatra be mihitsy?
- Tena tsy hitako izay havaly ry Rudy,
- Misy fanontaniana kely mba tikao hapetraka ito raha tsy mampaninona, efa manana sipa ve ndry?
- Fa maninona koa ianao no manontany an'izany?
- Mba tiako ho fantatra fotsiny ka!
- Ieny, misy olona miaraka amiko
- Hay! Fantatry ny ray aman-drenin-dry ve izany? Fa firy taona aloha ndry e? raha tsy maha diso an!
- Fantatry ry zareo izany ka! sivy ambinifolo taona aho izao, ary ianao?
- Zokin-dry folo taona be izao akia!
Dia nitohy teo ny resakay, nanontany ny momba ahy sy Manambina izy, ny nifankahitanay sns, dia nitantara ny momba azy koa. Raha mbola eo ampiresahana ny fiainana amin'ny ankapobeny iny izahay dia nandeha tamin'ny radio ny hira iray malaza dia malaza, dia nitsangana izy ary noraisiny ny tanako dia nentiny nandihy aho, hira tena tiany hono ilay izy: “I will always love you” hiran’i Whitney Houston. Teo ampandihizana no norohany ny molotro, gaga sady taitra be aho nefa tsy niala. Tsy nionona tamin'izany oroka izany anefa izy fa nampiany safosafo. Tsy naharitra aho ka avy dia nesoriko ny tanany,
- Rudy a! aoka sao hitohy zavatra hafa ka! Samy mananany olon-tiantsika anie isika e!
- Ieny e! fa tsy misy hahalala izany anie ry zareo satria isika eto ihany no mihaona dia samy miverina amin’ny fiainany avy eo fa tsy hifanarakaraka eny akory e!.
- Marina izany ry Rudy saingy tsy te hiditra amin’izany aho. Matahotra aho sao dia tsy hahatana izany tsiambaratelo izany ka hanimba ny fiarahanay sy Manambina ka! Tena tia azy aho ka tsy ho sahy hanitsaka azy. Ny namaly no orokao teo ary izany ohatrany efa manenjika ny eritreritro sahady.
- Miala tsiny ary aho Rohy a! tena sambatra ianao raha voatazonao hatramin’ny farany izany fisainanao izany. Tena menatra anao aho, izaho lehibe indray ity no manaonao foana, tsy mieritreritra fa dia entin’ny filàna fotsiny.
- Tsy misy olana re izany ry Rudy a! samy mba mibolisatra kely eny ihany amin’ny fiainana anie e! dia nitsikiako izy fa tena hita menatra be mihitsy ny endriny.
- Fa izao Rohy a! ianao moa mbola mijanona kely ao Tuléar alohan’ny mody?
- Ieny fa ahoana?
- Tsy izany mantsy fa mba saika hihanta kely aminao aho raha tsy mampaninona anao. Raha mety dia mety misy entana kely hoentinao miakatra. Misy zavatra tian'ny cousin-ko halefa hoan’ny zanany any Tanà mantsy hono nefa izaho mety tsy afaka handalo any aminy fa miaraka amin’ny fiaran’ny hotely dia tonga dia eny amin’ny aéroport, moa izy koa raha raikitra amin’ny asa dia tsy ho afaka hanatitra ilay izy any amiko.
- Tsy maninona fa ilazao ilay olona ary e! omeko anao ny numéro telephone ao amin’dry dadatoa dia asaivo miantso izy alohan’ny zoma izany.
- Misaotra akia a! ao fa miantso an-dry foana izy na izaho izany e! na lasako na tsy lasako ny entana.
Dia nisaraka teo izahay fa ny andro rahateo nanombokahariva moa ry dadatoa koa izay efa ho avy ka tsy tiako ny hahitany ahy mivoaka avy ao amin’ny Rudy.
# Posted by riani :: Tantara:: Hametraka hevitra (13) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
DISO LALANA (fizarana fahaefatra)
Tao anaty taxi-be…
- Nanao ahoana izy tao ry Rohy?
- Tsy hitako izay ilazana azy, azoazo ihany saingy rehefa misy zato tsara naoty noho aho dia tsy afaka aho.
- Izay mihitsy ny olana amin’itony concours itony. Raha sanatria tsy afaka ianao dia hi-double ve?
- an an an, aleoko manao zavatra hafa, sao very taona roa be izao eo raha mbola tsy afaka koa amin’ny manaraka. Ary ianao?
- Izaho koa hanao zavatra hafa fa mbola tsy haiko hoe inona, hiandry ny valiny aho aloha.
- Izaho tsy te ho eto amin’ny fotoana hivaliany.
- Dia ho aiza ianao?
- Mbola tsy haiko loatra, hoany Diego angamba, na Fort-Dauphin, na Tuléar
- Kay! Ary lavitra be daholo izany! Dia havelan-dry irery eto aho izany! Izaho anefa mba nanatena hoe hiara-handany ny vacances amindry
Henoko menabe indray ny tarehiko, tsy hitako izay holazaina!!!!
- Izay indray hafa, azo eritreretina ihany, dia inona anefa no hatao eto?
- Betsaka no azo atao ka! sa ndry tena te handeha vacances mafy dia mafy?
- Mba te hiala kely an’Antananarivo aho ny tena marina, tsy ela anie izany e!
- hay! andao ary hiaraka amiko ho any Antsirabe e! Hanao famadihana ry dada dia ho any izahay. Sa ndry tsy te hiaraka amiko any aminay?
- Ianao ity koa mampiomehy!hoy aho, sady gagagaga ihany aho amin’izany zavatra lazainy izany.
- Sangy akia izany a! rehefa angatahiko amin’i dada sy mamanareo ndry vao afaka hoentiko any, sa tsy izany?
Tsy hitako indray izay holazaina, dia tsy namaly aho.
- Ary toa tsy miteny ndry? Sao dia tezitra aloha e?
- Tsy hitako izay havaly fa tsy sosotra aho ka!
Niala ny taxibe izahay dia namonjy ny restaurant. Teny an-dalana tsy nisy niteny izahay fa nony tonga tao amin’ilay restaurant, rehefa nahavita ny commande dia notohizany ny resany.
- Izao Rohy ny tena marina a!tia anao aho, tena tia, ary azo lazaina fa potipotika mihitsy. Nanomboka ilay isika niaraka bus tamin’ny fanombohan’ny taom-pianarana iny ka hatramin’izao. Tena marina anie izany Rohy e!
- Ka naninona ianao no tsy niteny mihitsy hatrizay?
- Tena tsy sahy aho! Efa betsaka ny fihetsika asehoko aminao fa angamba tsy arakao ireny, sa nodinaofanina?
- Ka ianao tsy niteny dia noheveriko fa izaho no manao interprétation adaladala, hoy aho sady nitsiky kely.
- Andray ry Rohy! Dia sivy volana izany isika nifampiandry teo foana! Dia raha tsy nisy ity billet ity izany dia tsy nahalala izany ianao, dia izaho koa tsy nahalala hoe hay ianao efa miandry fotsiny izany.
- Lalina izany marina ! Soa ihany aho fa nanapakevitra ny hiteny taminao androany.Tena tia anao anie aho ry Rohy e! manonofy anao foana aho matetika, manonofy antsika moa izany e!
- Izany an! manonofy mihitsy ve? Izaho aloha dia nihevitra hoe izaho no mieritreri-dratsy tamin’ireny fihetsikao ireny satria ianao tsy mivaky amiko. Fa tsoriko aloha fa mahafinaritra ahy ianao ary manampitiavana anao koa aho.
- Faly be aho ry Rohy mahenoan’izany, izaho nihevitra hoe tsy miraika amiko akory ianao matoa tsy namaly ny fihetsiko. I Hery anie no niresahako an’izany dia izy no niteny tamiko hivaky aminao e! soa ihany aho fanihaino azy.
- Ireo namako ireo koa anieniteny tamiko daholo hoe tia ahy ianao raha ny fihetsikao amiko, fa izaho mody tsy taitra sady ianao rahateo tsy niteny mihitsy dia nodiko fanina sao afa-baraka eo aho. Hay izay tokoa izany.
- Soa ny naman-tsika famandinika antsika izany. Azo lazaina ve izany fa manomboka izao isika sy ndry ry Rohy dia miaraka?
- Izay izany koa, rehefa tsy mifanaraka ve moa tsy hisaraka, hoy aho sady nitsiky nananihany.
- Marina loatra izany, fa aza manahy ndry fa ho tia an-dry sy hanaja an-dry aho ry Rohy malalako! Sady mirana ery ny endriny niteny an’izany, toy ny misy jiro manjelanjelatra ao anaty masony.
- Eny ry Manambina malalako,izaho koa torak’izany. Ohatra ny hafahafa izany miantso anao sy antsoinao hoe malala izany, fa mahafinaritra ka!
Dia nifanoroka izahay roa,sambany aho nanoroka olona. Nahatsiaro sambatra ery aho tao anatin’ny minitra vitsy.
- Hono ho aho ry Rohy, raha tsy mahadiso, firy amiko izao ny olona niaraka taminao? Azafady raha manohina anao ny fanontaniako an! Aza tezitra, tsy sarom-piaro aho akory fa te hahalala fotsiny, ary tsy mampiova ny fitiavako anao ny isa omenao ahy.
- Tena vao ianao ry Manambina,mbola tsy nitia olona izany aho talohanao. Ary ny anao? Lazao ny marina an!
- Mitovy izany isika, fa efa nisy ankizivavy nitoriako fitiavana izay tany Toliary fa tsy tiany hono aho e!naharary kely mihitsy ny foko tamin’izay. Anisan’ny nampiahotra ahy hiteny taminao anie izany e! sao maharary fanindroany eo indray ity fokeliko.
- Hay ve! Dia tsy tia azy intsony izany ianao izao?
- Efa faran’izay mahasosotra ahy ny nahita azy taty aoriana satria tena nanaovany eson-teny be aho sady notantarainy ny mpiara-mianatra rehetra ilay izy dia tena menatra be aho. Fa aleo izy ho any, aza matahotra ndry fa tsy hanembatsembana ny fitiavantsika izany fa efa navaloko any ny momba an'iny!
- Ratsy toetra koa izany ankizy izany
- Sambatra ery aho izany ryRohy! Iny eny ny commande-tsika. Mazotoa homana akia ry malala a!
- Tena mbola vaovao sy hafahafa amin’ny sofiko ho aho ny maheno an’izany ry Manambina, fa tiako ka,mahafinaritra ery! Misaotra dia mazotoa koa ry malala a! sady nitsiky indray aho.
Dia nifanoroka indray izahay.
Toa niova tampoka izany aho,tsy nisy henatra ny olona sasany tao amin’ilay restaurant akory. Ny toeranay koa moa somary tanatinatiny, mpifankatia iray izay no teo akaikikaikinay teo,asa mety izay koa no tsy dia nahamenatra ahy.
Teo ampisakafoanana dia tsy nisy niteny izahay fa isaky ny mifampijery dia mitsiky. Samy sambatsambatra kely ery, sady ohatran’ireny olona niaraka efa ela ireny nefa vao adiny iray izay!
Avy nisakafo izahay dia nizotra namonjy ny arrêt bus mody eny Ivato. Teny an-dalana nifampitantana izahay roa sady nitohy ihany ny resaka.
- Tsara ve ilay sakafo teo ry Rohy? Toa tsy nahenoana feo mihitsy ndry teo ampihinanana?
- Tena tsara mihitsy! Izaho syi neny efa mpakao rehefa miantsena aty Analakely ka tratra atoandro. Ianao koa ary mba tsy niteny koa! Nankafy ery an’ilay crevette!
- Ka tsy fihinana isan’andro ireny koa! sa ahoana?
- Marina izany! Fa iny na ron’ananana ary matsiro foana satria teo ianao, dia satria faly be aho androany!
- Marina akia izany! Na ranomangatsiaka ary ve mety mamy rehefa eo anilan’ny tiana? hoy izy sadyniomehy.
- niomehy koa aho, sady namaly azy hoe asa re! ndao andramana e! Ity no tonga amin’ilay hira hoe “tsikitsiky tsy lany hamamiana rehefaeo anilan’ny tiana” nitsikitsiky sy niomehy foana isika androany! Tiako ery,tokony ohatran’izao foana ny fiainana ry Manambina
- Ao fa ezahin-tsika nyhitazona izao tsikitsiky izao ry malala a! fa hono ho aho, tonga dia hody ve in-dry?
- Fa saika mbola ho aizaisika?
- Tsy haiko, andao handalo anyan-trano hametraka ny entako dia ateriko ndry avy eo!
- Tsy maninona ka!
Lasa ny saiko teny an-dalana amin’ity hoe ho any an-tranony, ity no tonga amin’ilay resaka niaraka tamin’izy telo vavy teo hoy aho. Maro ireo fanontaniana nibosesika tao an-dohako toy ny hoe :"inona no hitranga rehefa tonga any? Sao dia mbola tsy tokony ho any ary aho? sns...", nefa malaina be aho ny hisaraka aminy. Mahatoky aho fa tsy ho izany kosa no hitondrany ahy any fa tena hanatitra entana marina izy dia hanatitra ahy avy eo. Mbola tsy nilamina ihany anefa ny saiko satria, rehefa tonga any an-trano indray ka mifanena amin’i dada na i neny dia inona nohambarako? Holazaiko ve hoe miaraka izahay? ohatra ny tsy te hitondra azy any an-trano any aho fa mbola matahotra ny hilaza izany amin'ireo ray aman-dreniko, sa aleo hanontaniana ny heviny.
Teo ampieritreretana aho no nisy nikitika nefa nanohy ny lalany ihany ilay olona fa tsy nijanona, hay i Vahatra zokiko.
- Hitanao ve ilay nikitika ahy teo? Hoy aho mantsy azy.
- Tsy tazako loatra fa ohatrany andeha haingana be izy, sady manao casquette koa, fa iza iny?
- I Vahatra iny, zokiko lahy!Tadidinao ve? Anihaniany tsara izao izaho rehefa tonga any an-trano. Ary mety efa ela izy iny no tao aorinan-tsika tao.
- Tadidiko hoe manana zokilahy ndry ka, fa asa raha tadidiko ny endriny raha mifanatrika izahay. Sao dia bediny akia ndry? Izaho tena matahotra anadahina sipa izany ka, tena marina e!sao vonoiny eo aho!
- hahaha, tsy manao an’izany re izy ry Manambina a! andao ary ataon-tsika izay hiarahana bus aminy diaprésenté-ko ianareo e! sady sur aho fa tsy tadidiny tsony ianao, sa maika loatra ve aho?
- Tsy maninona ka! Fa matahotra ihany aho na izany ary.
Nony tonga teo amin’ny arrêtbus izahay tsy nahatratra an’i Vahatra intsony, dia niditra tamin’ny taxibe teo. Samy tsy nisy niteny teny an-dalana, samy vizaka ny fanadinana ve sa samy nametsovetso ny zava-niseho tandroany? Ho ahy manokana aloha dia toa hadino ny fanadinana fa ity zava-baovao amin’ny fiainako ity indray no mibahana ato an-dohako. Toa tsy hahafoy ny hisaraka amin’i Manambina aho. Tsy andriko ery ny hitantarana izao amin’izy telo vavy.
Dia nandalo tany an-tranon’i Manambina izahay, tsy nisy olona tao fa ny mpanampiny irery, nametraka entana izy dia nisolo akanjo dia lasa izahay nakany an-trano. Tsy nifamela intsony ny tananay, ary tsy nitsahatra ny nitsiky izahay isaky ny nifampijery. Tsy dia nisy noresahina firy teny an-dalana fa samy nakafy ny fotoana angamba satria efa samy ela niandrasana.
Nandalo tao an-tsaiko indray ilay hoe "raha ao i dada na i neny dia ahoana?" Raha i Vahatra indray tsy mampaninona ahy fa izy ary efa misangy ahy foana amin’izay olona miaraka amiko, ny azy amin’io tsy hita hoe iza marina fa maro loatra ny ankizivavy hoentiny mandalo ao an-trano ao.
- Manambina a! raha ao an-trano i dada na i neny dia tsy mampaninona anao ve ny hi-présenté-ko anao amin-dry zareo hoe sipako?
- Tsy maninona mihitsy, fa sao dia masiaka be aloha ny dada sy neninareo?
- Tsy maninona izany ry zareo ka! I Vahatra ary mitondra sipa ao foana fa tsy bedy izany.
- Ka samy hafa anie ny fitaizana lahy sy vavy e! sa ny anareo tsy ohatran’izany?
- an an an! Ohatra ny mitovy foana ny fitondrana anay dahy hatrizay ka! Fa amin’izao lafiny izao aloha tsy fantatro izay hevitry ry zareo.
Tonga tao an-trano, izy dahy zandriko sy ny mpanampy no tao, i Vahatra hono nametraka entana fotsiny dia lasa niverina nivoaka indray, i dada sy i neny koa hono lasa namonjy fanasana any Antananarivo (any amin’ny ville io fa izany no fiantso azy avy aty Ivato) dia alinalina mihitsy vao tafody eo. Izy dahy moa samy tsy mbola misy mahafantatra ary tsy mieritreritra na inona na inona amin’izany fitiavana izany dia tsy nasiako olana.
- Tonga soa ato aminay ianao,mandroso!
- Misaotra !
- Ato ny efitranoko, dia ao ambadika ny an’i Vahatra, dia ny azy dahy iretsy ampita iretsy. Ny an’i dada sy neny moa ilay eo akaikin’ny salon ao ambany io.
- Malalaka kosa ny ato aminareo sady mangina be, tsy mitovy amin’ny ao aminay amin’ireo zanak’izokinay ireo.
- Rehefa ato daholo izahay rehetra dia mitabataba ato ka!
Samy tsy nisy niteny izahay, iManambina nipetraka teo amin’ny seza, izaho teo ambony fandriana. Nanantona ahyizy, noraisiny ny tanako dia nifanoroka indray izahay, sady elaela noho ireoteo aloha. Henoko toa mangorintsina hafahafa izany ny vatako, ny safosafotsy nahazatra ahy koa moa nanampy trotraka, tsy te horohany intsony ahosatria ohatrany nandeha haingana be izany ny fandehan-javatra rehetra,natahotra aho sao izahay manaonao foana eo, nefa tsy tiako hajanona koa ilayoroka sy safosafo. Tampoka teo, nakatony ny varavarana, nohidiany lakilemihitsy. Nidobooboka be ny foko, tena mbola tsy nidibodoboka ohatran'izayhatrizay nahatsiarovako tena.
- Manambina a! fa maninona nohidinao ny varavarana?
- Sao miakatra tampoka eo izy dahy na ny mpanampinareo.
- Aleo hisokatra ihany fa heno foana rehefa misy miakatra eo fa maneno io tohatra io.
- Eny ary e! izaho anie Rohy tsy haninona anao e! te hanakafy ilay oroka sy safosafo fotsiny aho nefa tsy tiako raha misy mahita isika, indrindra ny zandrinao satria mbola kely ry zareo.
- Izaho koa anie te hankafy fa tsy tiako sao ilay mpanampy mieritreritra zava-dratsy eo raha mahita ny efitrano mihidy.
# Posted by riani :: Tantara:: Hametraka hevitra (0) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)